Unicode ConverterZawGyi ConverterUnicode Helps
မုနျ့ဟငျးခါး	Posted in ကြှနျတေျာ့ အကွောငျး, ပေါကျကရအတှေး - June 1, 2009 - 32 Comments	ကြှနျတျောမုနျ့ဟငျးခါး အလှနျကွိုကျပါသညျ။ ငယျငယျကထညျးက မနကျစာကို မုနျ့ဟငျးခါးစားလြှငျစား မစားလြှငျ ထမငျးကွျောစားရသောကွောငျ့ မုနျ့ဟငျးခါးကို ဘယျလိုပုံစံဖွငျ့ခကျြခကျြ ကြှနျတျောမညီးမညူစားပါသညျ။ ဒီနလေဲ့ မဒမျ့အတှကျ ဆေးခနျးသှားပွရငျး ပငျနီဆူလာမှာ မုနျ့ဟငျးခါး စားဖွဈခဲ့သေးသညျ။ ပုံမှနျဆိုလြှငျဖွငျ့ မုနျ့ဟငျးခါးကို စငျကာပူတှငျ ဆိုငျမှာဝယျမစား၊ ထမငျးတဈပှဲစာမြှ ပေးရသဖွငျ့ ထမငျးသာဝယျစားသညျ။ မုနျ့ဟငျးခါးကိုတော့ စိတျကွိုကျစားနိုငျရနျအတှကျ အိမျတှငျသာ ခကျြစားသညျ။ သို့သျော ခုတလော မုနျ့ဟငျးခါး ခကျြမစားသညျမှာ ကွာပွီဖွဈသဖွငျ့ ဝယျစားလိုကျခွငျးလဲ ဖွဈသညျ။
မုနျ့ဟငျးခါးကို ငယျငယျကနယျတှငျနသေောကွောငျ့ နယျခကျြ ခပျပွဈပွဈကိုသာ စားဖူးသညျ။ ဒါကွောငျ့ မုနျ့ဟငျးခါးဆိုလြှငျ ပွဈပွဈနှဈနှဈရှိမှဟု အစှဲရျှိထားဖူးသညျ။ ကြှနျတျောက သူမြားတှလေို အရညျမြားမြားနှငျ့စားတာထကျ အဖတျမြားမြားဖွငျ့ ပွဈပွဈထှေးထှေးစားရသညျကို နှဈသကျတတျသညျ။ ဘူးသီးကွျောနှငျ့စားရတာကို ပိုကွိုကျသညျ။ ရနျကုနျသူ ရနျကုနျသားမြားကတော့ ပဲကွျောဖွငျ့ ကွီးပွငျးလာကွသောကွောငျ့ ဘူးသီးကွျောကွိုကျမညျမထငျ။ အညာသားဖွဈသူအဖကေ အိမျတှငျစိတျပါလကျပါ ခကျြပေးလြှငျတော့ ပဲကိုကွိုပွီး သသေခြောခြာ ကအြေောငျထောငျးကာ အညာခကျြ ခကျြပေးတတျသညျ။ မုနျ့ဟငျးခါးဆိုပါက မွနျမာလူမြိုးတို့တှငျ အခြိနျအခါမရှေး စားခငျြကွသညျ။ ဗိုကျပွညျ့နလြှေငျတောငျမှ အရညျကလေးတော့ သောကျသှားလိုကျဦးမယျ ဆိုသူတှခေညျြးသာ ဖွဈသညျ။ ဒါကွောငျ့လဲ မုနျ့ဟငျးခါးတဈမြိုးတညျးရောငျးပွီး ကွီးပှားခမျြးသာသှားကွသူတှေ ရှိကွတာဖွဈမညျ။ ပွောရမညျဆိုလြှငျ လကျဖကျရညျဆိုငျတှငျ မုနျ့ဟငျးခါးမှာစားရတာနှငျ့ မုနျ့ဟငျးခါးဆိုငျမှာ ထိုငျပွီး မုနျ့ဟငျးခါးစားရတာ အရသာခွငျး မတူကွပေ။ မနကျမိုးလငျး မုနျ့ဟငျးခါးဆိုငျမှာ မုနျ့ဝယျရငျး ကိုယျကြိတျပိုးနသေော ကောငျမလေးနှငျ့ အကွညျ့သူခိုးလုပျရသော အရသာမြိူး ကွုံဖူးသူမြားရှိလြှငျ ကောငျးကောငျးသိပါမညျ။
13,360 views	လူပျိုကြီး
ကြိုက်ရာသုံးဆောင် ဘိုအုန်းမောင် အကြော်နဲ့စား မုန့်ဟင်းခါး
မုန့်ဖတ်မလို ဟင်းရည်ပို ဘဲဥနဲ့စား မုန့်ဟင်းခါး။
အသုံးတည့်ချင်ရင် အိုးထဲဆင်းလိုက်ပါလား.။ MrDBA
=-X =-X =-X =-X =-X pm
ဘဲသွေး အီကြာထည့်စားပါက တရုတ်မလေးဖြင့်တူသွားသည်။
ဟယ်ကြည့် ဘယ်နှယ့်ဟာကြီးတုန်း… တူစရာရှားလို့ အီကြာကွေးထည့်စားတာနဲ့ တရုတ်မလေးနဲ့တူသွားသည်တဲ့ ဟင်း….
တို့က အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲပဲ တီးတာ ရန်ကုန်မှာတုန်းက။ ဘူးသီးကြော်နဲ့ပဲစားတာပဲ။ ပဲကြော် စလုံးရောက်မှ စစားတာ။ sin dan lar
ပြည် လမ်းရှည်လမ်းက ပုသိမ်မုန့်ဟင်းခါးရော အချစ်နဲ့ သွားမစားဘူးလား.. စားပြီးရင် ဝက်နံရိုးစွပ်ပြုတ်သောက်၊ အစာပိတ်က သုံးရာသီက ထောပတ်ဖျော်ရည်…. အားးးး…. စားချင်လိုက်တာ….။
မှတ်ချက်။ ။ စားသုံးသူများအကျိုးကိုမျှော်ကိုးပြီး ကိုဒီဘီကို အိုးထဲ ခုန်မဆင်းခိုင်းသင့်ပါ မမကေအိုအမ်….။ MK
မုန့်ဟင်းခါး ခေါ်ကျွေးတော့ဖြင့် လာမစားပဲ လူစိမ်းကားကြီးလုပ်ပြီး ခုမှ ကြိုက်သလေးဘာလေးနဲ့ လူဇိုး ponyate
ဖတ်ရတာ မုန့်ဟင်းခါးတောင် စားချင်လာပြီ။ Su
haven’t had breakfast yet.
so pissed with you. Su
မှန်လိုက်လေ ဆင်ဆင်ရယ် နွေးနေခြည်
သရေတမြှားမြှားနဲ့ ဖတ်လာလိုက်တာ အန်တီကွမ် ကွန်းမန့်ဖတ်ပြီးမှပဲ စားချင်စိတ်ကုန်သွားတယ် myo
ခေါင်းစဉ်မြင်ကတည်းကစားချင်နေတာ ဖတ်ပြီး သားရည်တွေမြိုချ ဂလု ဂလု..
အဲ ကိုဒီဘီ အိုးထဲခုန်ဆင်းထားတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးကတော့ အမေရိကန်စတိုင်ဖြစ်သွားပြီ.. MrDBA
ဗမာလို ရေးတဲ့ အတွက် ရော့ မုန့်ဟင်းခါး 😎 လိမ္မော်သွေး
ချောချောချီးချီး ဗိုက်ချာပါတယ်ချိုမှ…… kaungkinpyar
မုန်ဟင်းခါး လာစားတယ် မိုးကောင်းသူ
အားပါတရ လာစားသွားတယ်။ နောက်တစ်ခေါက်ကြရင် အိမ်လာနော်။ nu-san
မုန့်ဟင်းခါးအကြောင်း ရေးထားတာ ဖတ်ပြီး မုန့်ဟင်းခါးတောင် စားချင်တယ်.. အမလည်း မုန့်ဟင်းခါးကို ထမင်းနဲ့စားတာ ပိုကြိုက်တယ်.. ဗိုက်ဆာခံလို့.. 😀 တောင်ငူသား
ဆင်ဆင်ကပြော လွမ်းမောစရာ ပြည်မှာ။
တောင်ငူဟင်းရည်ကျဲ ပဲ ကြိုက်တယ်
မုန့်ဂျင်းဂါး စားချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်၊ နိုင်ဂံဂျားမှာ ဗမာပြည်လို အချဉ်ဖောက်ထားတဲ့ မုန့်တီ၊ မုန့်ဖတ် ဝယ်လို့မရနိုင်တာ too bad. ဟိုးအရင်က စကော့ဈေးနောက်ဖက် မီးရထားလမ်း ကုန်းကျော်တံတားကို ကျော်ပြီးရင် ယောက်လမ်းမရောက်ခင် နေရာမှာ မုန့်တီ မုန့်ဖတ် လုပ်ရောင်းတဲ့ဆိုင် ရှိခဲ့တာ သတိရသွားတယ်း Su
exactly how old are you????
😛 Moe Family
ဘူးသီးကြော်ကြိုက်မှန်းသိရင် ခေါ်ပါတယ်. တနေ့ကတင်ကြော်စားသေးတယ်…ဒီနေ့တော့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ပဲချက်တယ်. . လာစားမလား ? MrDBA
နို့သူဘဲ မုန့်ဟင်းခါးသမား မဟုတ်ရင် မလာနဲ့ဆိုဗျ။ အညိုးညိုးဘဲ။ ခေးကို
ကျမလည်း မုန့်ဟင်းခါးဆို ထမင်းကြမ်းနဲ့မှ စားလို့ကောင်းသလိုပဲ အထူးသဖြင့် အမေနယ်ပေးတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးပေါ့၊ သံပုရာသီးကို မညှစ်ဘဲ အစိပ်သေးသေးလေးနဲ့ အရမ်းစားလို့ ကောင်းတယ်၊ ငယ်ငယ်တုန်းကဆို မုန့်ဟင်းခါးချည်းပဲ စားရရင် အမြဲ ၂ ပွဲမှ 😀 အိ သက်
ညကြီးမင်းကြီး မုန့်ဟင်းခါး ရေခဲတုံးလေး နွှေးပြီး စားနေရပါပြီကွယ်
တော်တော်ဆိုးတဲ့ ကိုDBA မောင်ထွေး
Has it anything to do with Mohinngha? You see, my mule don’t like people laughing, he just has the crazy idea that you’re laughing at him. မောင်ထွေး
အိုးဘဲဥ ဖြစ်သွားမှာပေါ့ မလုပ်နဲ့။
ဟုတ်တယ်။ ကျမလည်း မုန့်ဟင်းခါးကို ထမင်းနဲ့မှ စားတတ်တယ်။ ဒီတိုင်းဆို မစားတတ်ဘူး… သက်ဝေ
မုန့်ဟင်းခါး သိပ်ကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ ဖတ်ရတာ အရသာကို ရှိလို့…
နောက်ဆုံးက မုန့်ဟင်းခါးလို အသုံးတည့်သော လူတယောက် ဆိုတဲ့ စာကြောင်းလေးကိုလဲ ဟုတ်ပေကသားပဲ လို့ တွေးပြီး သဘောကျနေသေးတယ်…
မမ ရေးတဲ့ ကော်မန့် နဲ့ သူ့အောက်က ကော်မန့်တွေ ဖတ်လိုက်ရမှပဲ…း)) Pingback: မုန့်ဟင်းခါး (၂) | MrDBA Blog.()
ဒါဆို ဦးဦးဒီဘီ နနျးညီအတှကျတော့ အသုံးမဝငျ..
မုနျ့ဟငျးခါး တစကျမှမကွိုကျ တစိမှ မစား
Copyright © 2016 MrDBA Blog. Entries (RSS).